Askar Ciidamada dawladda ka tirsan oo falal dil iyo dhaawac ah u gaystay dad rayid ah. | Radio Codka Qaranka
YOU ARE HERE:Home » Wararka Maanta » Askar Ciidamada dawladda ka tirsan oo falal dil iyo dhaawac ah u gaystay dad rayid ah.	Wararka Maanta	Askar Ciidamada dawladda ka tirsan oo falal dil iyo dhaawac ah u gaystay dad rayid ah.
Muqdisho (- Codka Qaranka – )..nin ku lebisan Direyska Ciidanka Dawladda federaalka Somaliya ayaa rasaas ku furay Nin rayid ah oo watay Moto Bajaj ah barqanimadii manta degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho.
Mashaqadan ayaa timi ka gadaal markii Ninka Mootada watay uu mootadii ku hor gooyay Gaari Mini Bus ah oo uu Askerigu saarnaa kaddibna inta Askerigii soo degay ayaa dhowr xabadood Caloosha uga dhuftay. Kaddibna goobtii isaga cararay.
Ninkii Mootada watay ayaa waxaa soo gaaray dhaawac, waxaana loola cararay Isbitaalka Keysaney oo ku yaala isla degmada Kaaraan.
Shilkan ayaa sida ay goob joogayaal sheegayaan wuxuu ka dhacay nawaaxiga saldhigga Boliiska ee degmada Kaaraan.
Goobta uu falkaas ka dhacay ayaa waxaa soo gaaray Ciidan ku sugnaa saldhiggaas kuwaasoo ku baxay goobtii uu ku cararay ninkii dhaawaca u gaystay Ninka rayidka ah in kastoo ayan weli gacanta ku soo dhigin ciidanka sida ay sheegayaan wararka halkaa ka imaanaya.
Dhinaca kalena Askeri ka tirsan Ciidanka Dawladda ayaa toogasho ku dilay Nin Rayid ah oo ku sugnaa degmada Dharkeenleey ee magaalada Muqdisho.
Dilka ninkan rayidka ayaa yimi ka gadaal markii muran xoog leh uu dhex maray Marxuumka iyo Ninka dilka u gaystay kaddibna uu rasaas ku furay taasoo keentay inuu isla goobtii ku geeryoodo.
Ninka dilka gaystay ayaa isku dayay inuu goobta ka baxsado hase yeeshee ciidamada ammaanka ee degmadaasi ay gacanta ku soo dhigeen gacan ku dhiiglaha.
Askeriga dilka gaystay ayaa iminka ku xiran saldhigga Boliiska ee Dharkeenleey iyadoo la filayo in la hor geeyo Sharciga.
Haweenay Soomaliyeed oo loo Dilay inay Xiran Weysay Indho Shareer Next post
Axmed Madoobe oo Iclaaniyay Dagaal ka dhan ah Al-Shabaab.	Codka